China SHF Coal Water Slury Steam Ndị na-emepụta mmiri ọkụ na ndị na-eweta ya | Ugboro abụọ Mgbaaka
SHF Coal Water Slury Steam Boiler na-eji mmiri slum iji chekwaa mmanụ ọkụ
Dika ụdị ihe ohuru di omimi site na iji teknụzụ nke pere mpe di ala.
1. Igwe mmiri na-enwete ọkụ dị ala na-ebu ọkụ, n'ihi ya, ikuku oxygen na-eme ka ikuku mmiri na-ere ala dị ala karịa nke a na-ere unyi ntụ, na mmiri dị otú ahụ nwere ike imebi ya ozugbo n'oge usoro nsị. Ihe na-eme ka akpukpo ahihia a na-aru aru dika ihe oria bukwara ibu.
Na-ekirikiri ebe a na-ekwo ekwo ekwo ekwo pụrụ inye ụdị iche iche unyi ma nwee ọ combụ ọkụ dị elu, nke kwesịrị ya mma maka ịdị ala ala, obere uru dị na ya.
The ash nke na-ekesa fluidized bed ji esi mmiri ọkụ bụ nke elu ọrụ, si otú ọ dị mfe ịghọta keukwu itinye n'ọrụ enweghị sekọndrị mmetọ.
4. irnweta ebe a na-anya mmiri ndagwurugwu nwere ike idozi ibu ya n'ọtụtụ. Enwere ike belata obere aka na 30% nke ikike zuru oke.
Ndụmọdụ anyị --- nke ịdị ala dị ala na - ekesa mmiri na - ere mmiri nke sọks butere nsogbu ndị dị ka nbibi ikuku, slagging na ash igbochi ndepụta mmezigharị ngwaọrụ.original nke ikuku mmiri na ịla n'iyi. Ugbu a ihe a choro na nchedo gburugburu ebe obibi siri ike. nke na - eme ka esemokwu dị n’etiti icheku na gburugburu ebe obibi na-arịwanye elu. N'okpuru ụdị dị otu a, ikesa ihe eji ehi ụra na-efe efe na atụmatụ nke nchedo gburugburu ebe obibi na nchekwa ike bụ nhọrọ kachasị mma gị.
Nke gara aga: SZS ikuku mkpuchi ikuku ejiri ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ
Osote: DHL Corner Tube Bulk Water Pipe Boiler
igwe na-ere uzu ọkụ
Usoro Circular Flow Bed Boiler Okwu Mmalite nke usoro nke SHFX CIRCULAR Flow BED PRODUCT: SHX CFB ji esi mmiri ọkụ: ike evaporation 10-35t / h, na uzuoku uzuoku nke 1.25-2.5MPa na uzuoku na uzuoku di omimi. Igwe mmiri na-ekpo ọkụ 14 ~ 39MW, 130 ℃ / 150 ℃ mmiri ọkụ ọkụ, n'okpuru nrụgide nke 1.0 ~ 1.6MPa; mmiri mmiri na-alọghachi bụ 70 ℃ / 90 C .CFBC teknụzụ, ịbụ ụdị ọhụụ na ntozu oke arụmọrụ, mmetọ dị ala na teknụzụ nwere ọtụtụ ihe, nke nwere ike ahụghị m…